8 wiil oo qaar kamid ah ay soomaali yihiin oo lagu maxkamadeynayo Oslo. - NorSom News
8 wiil oo qaar kamid ah ay soomaali yihiin oo lagu maxkamadeynayo Oslo.
Dhalinyaradan oo asal ahaan kasoo jeedo wadamada Somalia, Norge, Irak, Pakistan iyo Marokko ayaa da ahaan u dhaxeeyo 16 ilaa 17 sano. Waxaana lagu soo dacweeyay in ay xadgudub ku kala kaceen dhowr qof oo kala duwan inta u dhaxaysey bilihii April iyo July sanadkii hore. Dadka ay xadgudubka iyo cunfiga u geysteen waxaa kamid ah odey 82 jir ahaa oo hada geeriyoodey, balse sharaxaadii uu ka bixiyay sida wax u dhaceyn ayaa waxaa laga hor akhriyay maxkamada. Dhalinyaradan oo intooda badan dagan aaga xaafada Tøyen iyo Jordal ee Oslo ayaa ah kuwa saaxiib ah, qaar kamid ahna ay isku fasal dhigtaanba iskuulka. Waxaa kamid ah wiilashan lasoo dacweeyay, wiil dagan Sweden balse fasax ku joogay Norwey, lana socdey habeen kamid ah habeenada ay falalka gaysteen.
Mid kamid ah dadka soo dacweeyay wiilashan oo sharaxaad siiyay wargayska Dagavisen ayaa sheegay in habeen uu khamri soo cabay kana yimid baar uu dhalinyaradan ku yiri: Maxaad banaanka ka qabanaysaan saacadan, dhalinyaradiina soomaalida ah?. una usii gudbay dukaanka si uu sigaar uga soo gato. Balse marka uu soo noqdey ay dhalinyaradaas oo markaas ahaa afar ay noqdeen sideed ilaa sagaal. Mid kamid ah dhalinyarada ayaa waxaa dhex maray muran yar, intaas kadibna afar kale ayaa ninkii isugu tagay. Gaarsiiyeyna waxyeelo weyn, wuxuu sheegay in laga jabiyay daanka, uuna dhaawac kasoo gaaray dhabxanaga iyo isha. Dhacdadan ayaa waxaa mobil ku duubay qof dagan goobta wax ka dhaceen.
Mid ah wiilashan ayaa xagiisa sheegay inuu ninkan ahaa mid khamreysan oo raba inuu dagaalamo. Wuxuu ku yiri ereyo cunsurinimo ah, markii uu isku dayay inuu dajiyana uu ku qabtay qoor sagaaro. Taas oo sababtay in wiilasha kale ay ku wareegtaan ninkan, ayna laad kala dhacaan dhabarka, wajiga iyo madaxa. Mid kamid ahna uu ku dhuftay dhagax.
Maadaama ay dhalinyaradan ay da ahaan yaryihiin waxay u badantahay inaan la xukumin, balse lagu ciqaabo siyaabo kale. Saxaafada Norwey ayaa caan ku ah in marka uu qof ajnabi ah uu fal danbi ah gaysto ay dhalashiida sheegeen, una qoraan dhacdada si dhamaystiran, sifiicana u buun-buuniyaan.
Halkan ka akhri warka maxkamada wiilashan
Halkana ka akhri sharaxaada uu bixiyay mid kamid ah dadka soo dacweeyay.
Previous articleSoomaalida qaadanaysay dhalashada Norwey oo 60% hoos u dhacday sanadkii 2015
Next articleSoomaali sharciga lagala noqday waxyaabo ay facebook ku qoreen dartiis: waraysi